DRK133 Heat Seal Tester VUNEKA ndlovu ukucacisa imingcele uphawu ifilimu eziyisisekelo, amafilimu laminated, enamathela iphepha nezinye ukushisa uphawu amafilimu laminated ngokuvumelana nemfuneko izindinganiso isihlobo. Amapharamitha uphawu zihlanganisa ukushisa uphawu lokushisa, isikhathi uhlale, futhi ukucindezela ukushisa uphawu. Heat uphawu izinto ehlukile ukuma, ukushisa ukuzinza, fluidness, kanye ukushuba ungase ubonise ahlukahlukene ukushisa uphawu izakhiwo, okuyinto abangela ngokusobala ezahlukene uphawu imiklamo. Nathi ...
Isilawuli Micro-computer; LCD isibonisi;
Manu esibonakalayo, PVC ukusebenza ebhodini;
PID digital control lokushisa uhlelo:
ecashile isilinda double iluphu kanyekanye;
Amabili ukuhlolwa kokuqala mode manual unyawo isinyathelo;
Lokushisa isilawuli Independent we yasenhla nemithombo yasenzansi ukushisa uphawu ikhanda;
Abahlukahlukene ukushisa uphawu evele wenza oda;
Encapsulate ngisho-lokushisa amalahle ipayipi nge aluminium;
Ukufakwa Rapid nokuhlukaniswa ipulaki Ukushisa ipayipi;
Standard: Mainframe, yokusebenza manual
Heat ukubekwa uphawu Tester